Shacabka Qabridahar oo madaxwayne Mustaf banaanka Kore kaga Hortagay. | ogaden24
Shacabka Qabridahar oo madaxwayne Mustaf banaanka Kore kaga Hortagay.
Kumanaan Kun oo shacabka magalada Qabridahar ah ayaa madaxwaynaha dawlada deegaanka Somaalida mudane Mustafe Cagjar, waxay kaga Hortageen banaanka Kore ee magalada.
Wafdiga madaxwayne Mustaf ee Makhribnimadii shalay lagu soo dhoweeyay magalada Qabridahar ayaa Galinkii Hore ee isla shalay kabaxay magalada Godey ee xarunta Gobolka Shabeele, waxayna wafdigu booqdeen degmada Dhanaan iyo magaalada Ceelwayne ee xarunta Gobolka Nogob.
Madaxwayne Mustaf ayaa mashaariic dhinaca Horumarinta ah dhagax dhigay magalada Ceelwayne ee xarunta Gobolka Nogob, waxaana madaxwayne Mustaf uu sidoo kale balanqaaday in mashaariic waxtar leh laga Fulin doono deegaamo kale oo katirsan Gobolka Nogob oo kamida meelaha ugu liita dhinaca Horumarka deegaanka oo dhan.
Madaxwayne Mustaf ayaa Habeenkii xalay ahaa kulamo kala duwan Layeeshay waxgaradka ree Qabridahar iyo mamulada Heer Gobol degmo iyo kan magalada Qabridahar, waxayna madaxwaynaha iyo wafdigiisu saaka safar dhinaca dhulka ah ugu baxayaan magalada Jigjiga ee caasimada dawlada deegaanka Somaalida Ogadenia.